Qorshe ka dhan ah Al-shabaab oo Maanta lagu gaaray Magaalada Kismaayo - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Qorshe ka dhan ah Al-shabaab oo Maanta lagu gaaray Magaalada Kismaayo
October 7, 2019 5:01 PM - Written by Warbaahinta Allool News GKC
Magaalada Kismaayo ee Caasimadda dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa Maanta waxaa kulan xasaasi ah ku yeeshay Guddiga amniga Jubbaland,iyadoona kulan looga hadlay arrimo muhiim ah.
Kulanka ayaa waxaa shir Guddoomiyay Madaxweyne ku xigeenka Koobaad ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan,isla markaana waxaa goobjoog ka ahaa Taliyaha Ciidanka Daraawiishta,Taliyaha Booliska iyo taliyeyaasha guud ee Nabadsugida Jubbaland.
Sidoo kale Shirkaan oo bishiiba mar la qabto ayaa waxaa ka qeyb ahaa Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM,isla markaana looga hadlay xaaladda amni ee Jubbaland iyo dar dar galinta howlgalada ka dhanka ah Malleeshiyaadka Alshabaab.
Ciidanka Xoogga dalka iyo kuwa Maamulka Jubbaland ayaa howlgalo ka dhan ah ka wada deeegaano ka tirsan Jubbooyinka,iyadoona ay xusid mudan tahay in howlgal xalay ka dhacay duleedka Magalada Kismaayo lagu dilay xubno ka tirsan Al-shabaab.